Madheshvani : The voice of Madhesh - नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने सेतु हिन्दू राष्ट्र नै हो : सन्तोष पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष, हिन्दू परिषद् नेपाल
० नेपालको संविधानमा नै धर्मनिरिपेक्ष देश कायम हँुदाहँदै पनि तपाईहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा माग गर्नुको कारण के हो ?
— विगतमा नेपाल विश्वसामु हिन्दूराष्ट्रको रूपमा परिचित थियो । जसरी एक व्यक्तिको नामको पछाडि थर लेखिन्छ भने त्यो कुन जात र समुदायको हो भनेर थाहा हुँदैन । त्यसरी नै नेपालीको पहिचान भनेको हिन्दू हो । विगतमा पनि जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन अथवा बारह बुँदे सम्झौता होस् त्यसमा समेत नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र हटाउनुपर्दछ भन्ने धारणा थिएन । त्यसकारण यो एउटा ग्राईन्ड डिजाईनको तहत सबै नेपालीहरू एकबद्ध भई एकताको सूत्रमा बसेको अवस्थामा नेपाली–नेपालीबीच खाडल ल्याउन र आपसी भाईचारा मेटाउनको लागि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा धर्मनिरपेक्षको आडमा हिन्दु धर्म, संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने कुनै सेतु छ भने त्यो हिन्दु राष्ट्र नेपाल नै हो ।
० नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकै आधारमा हिन्दु धर्म माथि प्रहार भएको भन्न मिल्छ ?
— धर्मनिरपेक्षको नाममा अहिले नेपालमा क्रिसियनहरूलाई बढवा दिने कार्य भइरहेको छ । जर्बजस्ती हिन्दूलाई क्रिसियन बनाइएको छ । घरघरमा गएर बाईबल बाँड्ने, चर्चमा आउनुस भन्ने र मानिसलाई एक किसिमको थ्रेटिङ पनि छ कि हरेक समुदायको मान्छेले गुनासो गर्दा पनि प्रशासनले खासै चासो नदिने । केहि दिन अगाडि काठमाडौंमा नेपाललाई नै क्रिसियन राष्ट्र कसरी बनाउने भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो त्यसमा सरकारी स्तरबाट नै प्रधानमन्त्री लगायत केही विशेष नेताहरू नै उपस्थित भएर क्रिसियन धर्मलाई बढवा दिने काम गरिएको छ ।
नेपालमा ९४ प्रतिशत रहेको ओमकार परिवारलाई हिन्दूबाट नै तोडेर क्रिसियन बनाउने र भोली क्रिसियनको बाहुल्यता भएको ठाउँमा क्रिसियानाइज घोषणा गर्ने योजना रहेको छ । वर्तमानमा पनि कतिपय ठाउँमा हिन्दुले गर्ने संस्कार, क्रियाकलापमा पनि आक्रमण भएको पाइएको छ ।
यहि धर्मनिरपेक्षको आडमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईमाथि ठाउँठाउँमा आक्रमण भइरहेको छ । संविधानमा नै देश धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि एक अर्काको आस्थामाथि ठेस पुग्ने कार्य गर्नु हुन्न भनिएको छ तर पनि गाई खुलेआम मार्ने ओसारपसार गर्ने तथा आक्रमण गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसो हँुदा पनि प्रशासन मौन अवस्थामा नै रहेको छ । त्यसैले हिन्दू धर्म र सनातन धर्मको रक्षाको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ । हिन्दूका आस्थासँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । विश्वकै हिन्दूहरूको आशाको केन्द्र भनेको नेपाल नै हो त्यसैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्दछ ।
० एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि जात तथा धर्मको नाममा राजनीति तथा विवाद गरेर देशमा समृद्धि आउला त ?
— यसलाई धर्म र जातको नाममा राजनीति गरेको भन्न मिल्दैन । पहिला पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै थियो र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनु पर्दछ भनेर कसैले पनि आन्दोलन गरेका थिएन । विश्वमा हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम राष्ट्रहरू थुप्रै छन् र नेपाल पनि विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट हुनुपर्दछ । नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सम्पूर्ण धर्मवलम्बीहरू मिलेर बसेका थिए । हिन्दू एक नेपालको पहिचान थियो । यो पहिचान अझै पनि कायम गर्नुपर्दछ । विश्वमा जति पनि आन्दोलन भएका छन् ति सबै पहिचानकै लागि भएका छन् । हिन्दू राष्ट्र सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानको कुरा हो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिचानका लागि बनाउने हो ताकि अन्य धर्मलाई धपाउने उद्देश्यले होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यो हो कि विगतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सबै धमावलाम्बीहरू मिलेर बसेका थिए । एक अर्कामा सद्भाव र सदाचार कायम थियो ।
यहाँ केही राजनीतिक दलहरूले विपक्षीलाई धपाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र ल्याउन खोजिएको दाबी गरेको पाईन्छ तर यो वास्तविकता होइन । नेपालको स्वाभिमान आत्मासम्मान र पहिचानको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहिएको हो । साथै यदि सम्पूर्ण नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने हो भने यसको एक मात्र उपाय भनेको नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो ।
० हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि आजसम्म तपाईहरूले के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो ?
— आजसम्मको कार्यक्रमलाई हेर्दा हामीले ५० जिल्लामा हिन्दू नेपाल परिषद्का शाखाहरू विस्तार गरि हजारौ नेपालीहरूलाई यसमा आबद्ध गराएका छौ । यसमा बौद्ध तथा मुस्लिम साथिहरूको पनि सदस्य छन् ।
नियमित रूपमा मठ मन्दिरहरू सरसफाई, विभिन्न सामाजिक कार्यहरू, धार्मिक जागरणका कार्यक्रमहरू लगायत अन्तरक्रिया छलफल तथा समन्वयनका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेका छौ । साथै विश्वमा जहाँ पनि रहेर नेपाल हिन्दु राष्ट्रको रूपमा चाहने, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको केन्द्रको रूपमा लिनेहरूको अपेक्षालाई हामी पूरा गर्ने छौ ।
हिन्दू राष्ट्र भित्र रहेका कतिपय अन्धविश्वासका कारणले पनि धर्म परिवर्तन गर्ने समस्या देखिएको छ । हामी यस्ता अन्धविश्वासको अन्त्य गर्दै हिन्दू धर्मको संरक्षण र प्रर्वद्धनमा लागेका छौ । अबको पाँच बर्षमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
० भनेपछि तपाईहरूको एक सूत्रीय माग नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने हो ?
— नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो एक सूत्रीय माग नै हो । चाँडोभन्दा चाँडो नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौ । यो महान अभियानमा सम्र्पूण नेपालीले आ–आफ्नो तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न हामी आग्रह गर्दछौ ।
० हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउँदा कतिपय संघसस्थाबाट राजासहितको हिन्दुराष्ट्र भन्ने कुराहरूपनि आईरहेका छन्, यसमा तपाईहरूको धारणा के छ ?
— हिन्दु राष्ट्रको कुरा गर्दा राजा तथा अन्य कुराहरू गर्र्नु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । जो कुनै पनि हिन्दुले आफ्नो हिन्दुको कुरा गर्न सक्छ तर कतिपय संघसस्थाले राजासहितको हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाउनु त्यो उनीहरूको कुरा हो । यो केही षड्यन्त्रकारी व्यक्तिहरूले गर्ने कुरा हो । तर हिन्दुले हिन्दु राष्ट्रको कुरा गर्न हिन्दुत्वको कुरा हो । हाम्रो प्रमुख एजेन्डा भनेको नेपालीको पहिचान हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नु हो, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने दायित्व सम्पूर्ण नेपालीको हो । हिन्दुको कुरा र काम गर्ने सबै राजाबादी हुन् भन्ने भ्रम पैदा कसैमा नहोस् । शासन जो सुकैको होस् तर नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्दछ ।
० विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउने पहल गरिरहेका छन्, यी राजनीतिक दलहरूसँग तपाईहरूको सहकार्य कस्तो रहन्छ त ?
— जुनसुकै संघसस्था वा राजनीतिक दल, जसले प्रष्टरूपमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोक्दछ, उसँग सहकार्य हुन्छ तर राजा तथा अरू कुनै पनि एजेण्डाका साथ आएको छ भने हामीसँग सहकार्य हुन सक्दैन । विगतका दिनमा कमल थापाले हिन्दु राष्ट्रको कुरा गरेर धेरै मत प्राप्त गरेको हो तर त्यो शक्ति तथा हिन्दुको मुद्दालाई बेचेको कारण राप्रपा आजको दिनमा समाप्त भएको छ । अब पुनः राप्रपाले हिन्दुको नाममा जनताको मन जितेर सर्पाेट पाउने अवस्था छैन ।
० सबै राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपिक्ष स्वीकारिसकेको अवस्थामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
— २०७५ सालमा हामीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएका हाँै । हामीले धार्मिक र सामाजिक कार्यमार्फत जनजागरण कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौ । हिन्दु भित्रका भएका विभिन्न विभेदलाई पनि अन्त्य गर्न गईरहेका छौँ र पाँच बर्षमा २५,००,००० नेपाली जनतालाई यो संगठनमा आबद्ध गर्दैछौ । जनताको शक्तिको अगाडी कसैको केही लाग्दैन र राजनीतिक दल भनेका जनताका शक्ति हो । विगतका दिनमा न कसैले हिन्दु राष्ट्र खारेजको माग गरेको थियो न त यसका लागि कुनै आन्दोलन नै भएको थियो । यो केही विदेशीको चलखेल, शक्तिको आड र केही व्यक्तिको स्वार्थमा नेपाल हिन्दु राष्ट्रबाट हटाइएको हो । त्यसकारण नेताहरूको कुनै स्टेन्ड पनि छैन, राष्ट्रियताको सवालमा पनि कोही नेताहरू छैनन् ।
० विशेष गरी कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा माग गरेका छन्, तिनीहरूसँग तपाईहरूको छलफल कस्तो रहेको छ ?
— कांग्रेस मात्र होइन नेकपा लगायत राप्रपाका पनि केही नेताहरूले कुरा उठाएका छन् । तर यसको जवाफमा हामीले ‘तपाईहरू हिन्दुको बच्चा हिन्दु हो, पार्टी पार्टीका स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ दोहोरो चरित्र देखाएर हुँदैन’ भनेका छौ । हिजोसम्म सशांक कोइरालाले हिन्दुको कुरा गरे तर नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको अभियानमा हस्ताक्षर गरेनन् । त्यसैले यदि राजनीतिक दलहरूले हिन्दुको कुरा गर्छन् भने पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । कतिपय नेताहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जो नेपाललाई नितान्त हिन्दुराष्ट्र चाहनुहुन्छ ।
० नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको सुनिन्छ, तर तपाईको कार्यक्रमको लागि भारतको सहयोग सम्बन्धमा कस्तो धाराणा रहेको छ ?
— हिन्दु राष्ट्रको सन्र्दभमा भारतमात्र नभई विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुहरूलाई जोड्ने हाम्रो अभियान रहेको छ । विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुको आशाको केन्द्र हो । मानिसले जीवनमा जति धाम गए पनि पशुपतिमा आएर पुजा गरेन भने उसको जीवन पूर्ण हँुदैन भन्ने मान्नेता पनि रहेको छ । त्यसकारण भारतमात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई नै हामी सल्लाह र सहकार्यका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाल जसरी भए पनि हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्दछ ।